ထိုငျးနိုငျငံ၊ ခငျြးမိုငျမွို့တှငျ အခွစေိုကျ နထေိုငျသညျ့ ဦးအောငျမိုးမွငျ့သညျ မလေ ၁၆ ရကျနကေ့ ကငျဆာရောဂါနှငျ့ ကှယျလှနျသှားသညျ။ ကှယျလှနျခြိနျတှငျ အသကျ ၄၉ နှဈ ရှိပွီဖွဈသညျ။
၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈနောကျပိုငျး BBC အသံလှငျ့ဌာနက ကာလအတနျကွာ ထုတျလှငျ့ခဲ့သညျ့ သပွကေုနျးရှာ ရဒေီယိုဇာတျလမျးတှဲတှငျ ကိုကွှကျဖွူအမညျဖွငျ့ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သူ ဦးအောငျမိုးမွငျ့သညျ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးပှဲမြား၊ ထိုငျးရောကျ မွနျမာပွညျသား ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားအကွောငျးကို အထူးပွု ရေးသားတငျဆကျခဲ့သူဖွဈသညျ။
ထိုငျးနိုငျငံရှိ မွနျမာနိုငျငံသားတခြို့ တညျထောငျထားသညျ့ သတငျးနှငျ့ မီဒီယာ ကှနျယကျ (Network Media Group) ၏ ဦးဆောငျသူတဈဦးဖွဈသူ ဦးအောငျမိုးမွငျ့သညျ RFA သတငျးဌာနအတှကျ သတငျးမြားကို နှဈပေါငျးမြားစှာ ပေးပို့ခဲ့သူတဈဦးဖွဈသညျ။
မီဒီယာအဖှဲ့အစညျးမြား ပူးပေါငျး ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ နိုငျငံတကာ မွနျမာသတငျးအဖှဲ့ (BNI) တှငျလညျး အရေးကွီးသော တာဝနျမြားကို ကှယျလှနျခြိနျအထိ ထမျးဆောငျခဲ့သူဖွဈသညျ။
သတငျးသမား ဦးအောငျမိုးမွငျ့ ကှယျလှနျသှားခွငျးမှာ သတငျးလောကအတှကျ ဆုံးရှုံးမှု ဖွဈပါသညျ။ မွနျမာဂြာနယျလဈကှနျရကျက ဝမျးနညျးကွောငျး မှတျတမျးတငျအပျပါသညျ။
သတင်းသမား ဦးအောင်မိုးမြင့် ကွယ်လွန်
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် အခြေစိုက် နေထိုင်သည့် ဦးအောင်မိုးမြင့်သည် မေလ ၁၆ ရက်နေ့က ကင်ဆာရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၄၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း BBC အသံလွှင့်ဌာနက ကာလအတန်ကြာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် သပြေကုန်းရွာ ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ကိုကြွက်ဖြူအမည်ဖြင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဦးအောင်မိုးမြင့်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ထိုင်းရောက် မြန်မာပြည်သား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြောင်းကို အထူးပြု ရေးသားတင်ဆက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ တည်ထောင်ထားသည့် သတင်းနှင့် မီဒီယာ ကွန်ယက် (Network Media Group) ၏ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်မိုးမြင့်သည် RFA သတင်းဌာနအတွက် သတင်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးပို့ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံတကာ မြန်မာသတင်းအဖွဲ့ (BNI) တွင်လည်း အရေးကြီးသော တာဝန်များကို ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သတင်းသမား ဦးအောင်မိုးမြင့် ကွယ်လွန်သွားခြင်းမှာ သတင်းလောကအတွက် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်က ဝမ်းနည်းကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
udaisabo March 4, 2022 at 2:32 AM
Caesars Casino Hotel - Jackson County - JCMH Hub
Contact Caesars Casino 양주 출장마사지 Hotel, 계룡 출장마사지 Jackson County, ON 87782. Get Directions. Menu 양산 출장마사지 · Menu 구미 출장샵 · Contact Us · Contact Us · 안동 출장샵 Phone number.
Unknown March 30, 2022 at 12:13 PM
The King Casino is the communitykhabar only casino near the casino. herzamanindir.com/ All casino games are legal and the game variety is huge! The games https://deccasino.com/review/merit-casino/ are also available at https://jancasino.com/review/merit-casino/ any of the